Tadiavo ny ivon'ny Gravity ho an'ny famolavolana fampisehoana lehibe | Martech Zone
Fantatry ny rehetra fa ny PowerPoint no fitenin'ny orinasa. Ny olana dia ny ankabeazan'ireo rindrambaiko PowerPoint dia tsy misy afa-tsy andian-tsary mihetsiketsika be loatra ary matetika mampihetsi-po izay miaraka amina resaky ny mpanolotra.
Rehefa namolavola famelabelarana an'arivony izahay dia nahita fomba fanao tsara indrindra izay tsotra nefa tsy dia miasa firy. Ho amin'izany, namorona isika Ivotoeran'ny hery misintona, rafitra vaovao amin'ny fananganana fampisehoana. Ny hevitra dia ny deck tsirairay, ny slide rehetra, ary ny atiny rehetra ao anaty tokotanin-tsambo dia mila teboka ifantohana. Mba hanaovana izany dia mila mieritreritra fampisehoana avy amin'ny teboka lehibe telo ny olona iray: (1) makro, fampisehoana malalaka, (2) solafaka, ary (3) amin'ny ambaratonga goavambe, izay misy data na atiny tsirairay ao anatiny dinihina tsara ny slide.
Makà fomba fijery makro
Hanombohana, eritrereto ireo fampisehoana amin'ny fomba fijery makro, jereo ny fampisehoana nataonao manontolo. Inona ny teboka ifantohan'ny fampisehoana ataonao, izay mampivondrona ilay tokotanin-tsambo sy manadio ny tanjon'ny fampisehoana nataonao? Avy eo mandeha amin'ny ambaratonga iray lalina kokoa. Ny slide tsirairay dia tsy maintsy minia mandroso ny tanjon'ny tokotanin-tsambo. Raha tsy manao izany dia tokony hanontany ianao hoe, inona no tanjon'io slide io? Ahoana no ampidiriny amin'ilay sary lehibe amin'ilay fampisehoana?
Ankoatr'izay, ny slide tsirairay dia tsy maintsy manana ny Center of Gravity, fifantohana mitazona azy io, manome azy mandanjalanja sy firaisana. Ary farany, zahao amin'ny akaiky ny atin'ny slide tsirairay. Diniho ny fehintsoratra tsirairay, ny tabilao tsirairay, ny lohateny tsirairay. Ny singa, latabatra na grafika tsirairay dia tokony hiresaka ny ifantohan'ny fampisehoana, fa mila ny teboka ifantohany manokana koa.
Mamelà ahy haka sary amin'ny fanoharana. Raiso ny rafitry ny masoandro. Ny masoandro no singa afovoan'ny rafi-masoandro ary manome hery misintona amin'ny planeta tsirairay. Na izany aza, ny planeta tsirairay dia samy manana ny fisintohany gravitational. Toy izany koa, ny slide tsirairay, ary ny zavatra rehetra ao anaty slide tsirairay, dia tsy maintsy miresaka amin'ny ivon'ny gravité (izany hoe ny masoandro). Na izany aza, toy ny planeta ao amin'ny tontolon'ny masoandro, ny slide tsirairay sy ny zavatra tsirairay ao amin'ny slide tsirairay dia tsy maintsy manana ny fifantohany manokana ihany koa, izay mitazona azy io hifototra sy hirindra.
Andao hodinihintsika ny paikady sy ny tetika sasany hahazoana antoka fa voatazona hatrany ny fifantohana isaky ny ambaratonga.
Hevero ho toy ny iray manontolo ny volanao
Ny famelabelaranao amin'ny ankapobeny dia tokony hanana hevitra, lohahevitra na tanjona lehibe iray. Mila misy tanjona iraisana. Mivarotra ny sanganasao, ny hevitrao, ary ny fikarohana ve io tokotanin-tsambo io? Raha izany dia fantaro ny zavatra amidinao. Raha tsy izany, mizara ny sangan'asa fotsiny fotsiny ny tokotaninao, mampandre fa tsy mila manao ny hetsika ny mpanatrika. Raha mizara ianao, inona no zavatra tianao halaina amin'ny mpanatrika ny fampisehoana?
Diniho ny mpihaino
Manaraka, diniho ny mpanatrika. Amin'ny ambaratonga makro, eritrereto ny firafitry ny mpihaino anao, na ny mpanjifa, ny mpitantana, na ny fikambanana midadasika kokoa. Ny ankamaroan'ny famelabelaran-kevitra dia tsy voafintina tsara ho an'ny filan'ny mpanatrika. Fa kosa, natsangana tamin'ny fomba fijerin'ireo mpandahateny izy ireo, saingy zava-dehibe ny mampisaraka ny mpihaino anao ary manangana ny tantaranao manodidina azy. Fa maninona no eto izy ireo? Inona ny haavon'ny fahaizan'izy ireo sy ny andraikiny? Firy ny filan'izy ireo amin'ny antsipirian'ny granular, fanafohezana, sns? Inona avy ireo ahiahin'izy ireo amin'ny asa aman-draharaha? Mpino tsy mino ve sa mpino? Inona no karazana fanoherana hatrehanao? Ny valiny dia hanampy amin'ny famolavolana ny fomba fanorenanao ny tokotaninao. Mieritreritra lalina momba ny mpihaino anao alohan'ny fananganana ny famelabelaranaodia hanampy amin'ny fanatsarana ny 'vokany.
Farany, diniho ny firaisan-kina. Miverena kely ary zahao ny zava-drehetra amin'ny fomba fijery sy famoronana tantara. Voalohany, manangana rafitry ny fitantarana. Ny famelabelarana dia tsy andiana hevitra tapaka, teboka na fandinihana, fa ny endrika farany fitantarana multimedia. Ny famolavolana fampisehoana dia fifehezana mipoitra izay manambatra ny teny, ny horonan-tsary, ny sarimiaina, ny angona, ny haino aman-jery rehetra eritreretina.
Ny tokotanin-tsambo tsirairay dia mila firafitra fitantarana; fanombohana, afovoany ary fiafarana, ary manaparitaka ireo hevi-dehibe amin'ny fizarana sy ny fizarana. Arakaraky ny maha-sarotra ny raharaha no ilaina kokoa ny fandaminana. Ny iray dia mila fikirin-kevitra amin'ny vondrona hevitra, mamorona hierarchy sy ny filaharana. Manomboka amin'ny famaritana aho, izay manangana hierarchy amin'ny famaritana, avy eo mandroso amin'ny storyboarding (izany hoe manodidina ny sivy na 12 efamira amin'ny takelaka), ary manao sarisary marokoroko, tsy misy antsipiriany. Ity dingana ity dia fomba iray handraisana fampahalalana sarotra sy hananganana fitantarana an-tsary. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fitambarana drafitra sy storyboarding, ny vokatra dia ho rafitra fitantarana voarindra miaraka amina ambaratongam-pahefana iniana.
Raha tetika famolavolana tsotra no jerena, ny fitsipika fototra tokony harahina hananganana firaisankina manerana ny tokotaninao dia ny famerana ny sarimiaina sy ny tetezamita. Raha ny marina, ny famerana ny fivezivezena rehetra amin'ny tetezamita farany manjavona dia fitsipika mifehy tsara. Raha tsy mpamorona mahay na mpanaingo ianao dia tokony hiala amin'ny sary mihetsika PPT sy ny tetezamita. Izany dia nilaza fa ny tetezamita manjavona dia mitana toerana lehibe ho an'ny fampisehoana satria mora izy ireo, matetika ampiasaina amin'ny sarimihetsika, fa tsy cheesy
Ny paikady roa manaraka dia mifandraika amin'ny endritsoratra. Miezaha hifikitra amin'ny fianakaviana endri-tsoratra roa ao anaty fampisehoana iray: ny iray ho an'ny lohateny sy ny anaram-boninahitra, ny iray hafa ho an'ny zavatra hafa rehetra (ao anatin'izany ny dikanteny sy ny kopian'ny vatanao). Aleo ihany, mampiasa fianakaviana font iray fa miovaova ny lanja (oh: sahy amin'ny lohateny sy lohanteny, mahazatra na maivana ho an'ny kopian'ny vatana sy dikanteny). Matetika aho mampiasa Franklin Gothic, izay endri-tsoratra kanto sy voalanjalanja. Calibri dia safidy mety amin'ny kopian'ny vatana sy lahatsoratra lava kokoa, satria haben'ny endri-tsoratra kely kokoa no mamonjy habaka, nefa mora ny miasa.
Ny paikady manaraka dia ny loko. Raha ny lokon'ny endri-tsoratra dia mazàna mampiasa loko iray mandritra, na loko mitovy loko, mainty / volondavenona. Mety hiteny ianao fa mankaleo, fa ny tena marina dia ny fahalianana hita maso nanjary noforonina avy amin'ny nuansa amin'ny fampiasana endritsoratra, fa tsy amin'ny avana misy endritsoratra miloko mamiratra. Ny fahalianana amin'ny maso dia avy amin'ny ambaratongam-pahefana, sary na data. Ka mifikira amina endritsoratra iray na roa, ary fero ny fampiasana loko. Ampiasao tsara ny loko iray ho an'ny kopian'ny vatana rehetra, ary ny loko hafa amin'ny loko iray ihany mba hamoronana hierarchy.
Slide tsirairay, teboka ifantohana
Izahay dia nijery ny tokotanin-tsambo manerantany; Ankehitriny dia hosaronantsika slide tsirairay. Ahoana ny fanombatombanana ny slide? Ahoana no ahazoanao antoka fa samy manana ny afovoan'ny hery misintona aminy ny tsirairay? Averina indray, ny slide tsirairay dia tsy maintsy mandroso ny tanjona ankapobeny amin'ny tokotanin-tsambo. Raha tsy izany dia maninona no eo? Na eo aza izany dia mila ny teboka ifantohany manokana ihany koa ny slide tsirairay. Tokony hisy ny ambaratongam-pahefana, ny fifandanjana ary ny fahitana mba hampazava ny dikany tsirairay, ary ny fanavahana ny fampahalalana izay zava-dehibe kokoa noho izay tsy dia zava-dehibe loatra.
Toy ny ambaratonga hafa dia misy tetika ampiasana amin'ny haavon'ny slide. Ny fahendrena mahazatra amin'ny famolavolana solosaina dia ny fanomezana hevitra iray isaky ny slide. Ny olana dia tsy hoe pragmatika foana izany. Hevitra iray isaky ny solosaina dia tetika tsara ho an'ny lahateny TED, saingy tsy mandeha amin'ny fampisehoana orinasa isan'andro, azo antoka fa tsy natao ho an'ny fikarohana na famelabelaran-kevitra sarotra misy data maro.
Amin'ny ankabeazan'ny fampisehoana ataon'ny orinasa dia tsy azo ihodivirana ny "fanapahana entana". Ny vahaolana dia ny fandanjalanjana ny fahitana sy ny ambaratongam-pahefana, koa raha tokony hifantoka amin'ny hevitra iray isaky ny mihetsika ianao dia tokony ho paradigma mety kokoa hevitra iray isaky ny fotoana ara-potoana. Azonao atao ny manana hevitra betsaka araka izay ilaina ao anaty solo-tsary iray, sy fampahalalana marobe, fa ny tena fanalahidy dia ny hifehezana ny sain'ny mpanatrika isaky ny fotoana ara-potoana. Ity dia momba ny famolavolana ny fifandraisana misy eo amin'ny sary sy ny teny ampiasaina, mba hahazoana antoka fa tsy afangaro ny mpanatrika. Ny sary sy ny teny dia tokony hampifandraisina tsara amin'ny fotoana rehetra.
Tetika hafa - Tsorina ny. Angamba somary manintona ilay izy, saingy milay ny endriny madio. Ny curation sy ny fanovana dia miteraka fahatsorana. Raha misalasala ianao, ny fitongilanana dia tokony ho amin'ny fanapahana sy fametrahana kely kokoa noho ny bebe kokoa amin'ny slide tsirairay.
Manaraka, diniho ny habaka ratsy izay manodidina ny andalan-tsoratra, tabilao na sary. Ny toerana ratsy dia manampy amin'ny famaritana ny fetra amin'ny slide sy sary ary mamorona fifandanjana. Ity dia hevi-miafina, nefa manampy fahaizana amin'ny famolavolana slide. Mila toerana ratsy ianao fa tsy be loatra; fandanjalanjana io ka mila eritreritra sy fampiharana. Miezaha mankamin'ny fifandanjana, ary hanana ny filaminana sy ny fahitana mazava ny sary mihetsika.
Ny sisin-tany dia fandinihana paika iray hafa. Vitsy ny olona tsy mamolavola famelabelarana ho an'ny fivelomana mifantoka amin'ny fitazonana ny sisin-tany mitovy amin'ny ambany, ambony, havia ary havanana. Raha ny fahitako azy dia anisan'ny fitaovana famolavolana manan-danja indrindra ny sisiny. Miezaha foana hitahiry sisin-tany, na dia midika ho fampihenana ny tabilao, ny lahatsoratra, ny sary ary ny zavatra hahamety azy ireo aza eo am-pitehirizana ireo sisin-tany tsy miova amin'ireo slide-nao.
Farany, diniho ny lahatsoratra - niresaka momba ny slide de députt, ary ny fahatsorana izahay, fa ny tena izy dia hiatrika ny rindrin'ny teny amin'ny lahatsoratra diso tafahoatra ianao. Ahoana no fomba hamoronana ambaratongam-pahefana misy rindrin'ny teny? Mampiasà fanararaotana ny lahatsoratra. Isaky ny manana andalan-tsoratra lehibe ianao, dia eritrereto ny mitarika lohateny fohy miaraka amina lohateny fohy izay mamintina ireo fomba fitadiavana lehibe azo avy amin'ilay andalana. Ary atokàny ny lohateny amin'ny alàlan'ny lahatsoratra sahisahy misy lohateny, anaovy lehibe kokoa sy / na ataovy maizina kokoa noho ny andalana ilay lokon'ny endri-tsoratra.
Farany fa tsy kely indrindra, jereo ao anaty slide tsirairay
Ny haavon'ny zoom farany dia mijery ny zavatra rehetra (ie, ny tabilao tsirairay, ny andinin-tsoratra, ny sary, sns.) Ao anaty slide tsirairay. Raha momba ny angona, ny tabilao rehetra, ny latabatra ary ny sary dia tokony hifandray mivantana amin'ny Centre of Gravity amin'ny ankapobeny. Diniho fatratra ny fanesorana ireo angona angona raha tsy manitatra ny tanjona ankapobeny amin'ny famelabelarana. Izany dia nilaza fa ny tabilao tsirairay, ny latabatra ary ny sary dia mila ny fifantohany, ny fifandanjana ary ny hierarchy izay mampiaraka azy.
Voalohany, ekeo fa ny zaza dia angona. Mandany ora sy vola tsy tambo isaina ianao amin'ny fampiroboroboana ny angon-drakitrao sy ny fandalinana, ary tianao hizara izany. Ny olana dia tsy misy miraharaha izay momba ny zazakelinao (na firy na firy ny sarin-jaza zarainao), ary tsy misy miraharaha izay momba ny angon-drakitrao. Rehefa maneho ny asany, ny ankamaroan'ny olona dia mizara ny angon-drakitra satria tsy te-hamitaka na hikorontana izy ireo, ary ny tena zava-dehibe dia tsy te hiala amin'ireo zava-dehibe izy ireo. Voalaza fa, diniho fa ny lakilen'ny andraikitrao amin'ny maha mpanolotra anao dia ny fikolokoloana, ny fanomezana fampahalalana marim-pototra fa tsy ny fandevenana ny mpihaino ao aminy.
Misaraka, ny famolavolana angona dia mampiasa fitaovana mitovy amin'ny famolavolana slide. Mampiasà loko sahaza sy tsara. Ny fampiasana mahomby ny habaka ratsy dia miteraka hierarchy. Amin'ny faran'ny andro, ny angona dia tokony ho ilay maherifo, ny teboka angona manan-danja indrindra dia tokony hisongadina. Ario ireo marika sy kaontenera tsy ilaina, marika hash, andalana ary angano. Ario ny lakolosy sy siotsiôna izay miteraka fikorontanana sy fisavoritahana eo amin'ny fahitana. Tadiavo ao anaty angona ilay tantara, ary aza mizara be loatra.
Raha handrahoana ny famolavolana angon-drakitra anaty lisitra punch, misy telo tsy maintsy atao. Ny angona dia tokony:
Voalohany, mila mora ny angona azo idirana ary marina. Ny famaky sy ny refin'ny sary, ny bara ary ny tsipika dia tokony ho marina. Ny fanamafisana ny sary dia tokony haneho ny antontan'isa. Ny ambaratongam-pahefana hita maso dia tokony hahatonga ny angon-drakitra ho mahery fo, tsy misy lakolosy sy siotsiôna be loatra.
Faharoa, ny angon-drakitrao takatry? Ny data dia tokony hitantara tantara iray ary hifandray mivantana amin'ny lohahevitra fampisehoana ankapobeny. Raha tsy misy zavatra mahaliana momba ny angona dia diniho ny fanesorana azy. Mieritrereta momba ny famolavolana ny granularity data, satria arakaraka ny maha granular azy dia vao mainka sarotra ny manasongadina ny fomba fijery.
Fahatelo, ny data tsara tarehy, amin'ny hatsarana? Mampiasa ny loko ho fitaovana ve ianao? Tsotra araka izay azo atao ve ny fampisehoana ny angona? Misy tsipika, soratra ary endriny sahy ve ilana azy? Misy toerana ratsy ve?
Rehefa mamolavola fampisehoana rehetra dia diniho ny fomba fanatanterahana azy amin'ny ambaratonga telo an'ny zoma. Isaky ny ambaratonga, diniho ny fomba ifandraisany amin'ny Center of Gravity. Ary miaraka amin'izay dia tsy maintsy manana ny teboka ifantohany izay mitazona ny firaisan-kina. Mifantoha amin'ireo ambaratonga telo ireo ary ny fampisehoana nataonao no hitondra ny andro.
Tags: data datatabilaoDatakeynotefamolavolana keynotePower Pointfamolavolana powerpointslide powerpointfampahafantaranafamolavolana fampisehoana
Jifflenow: Ny fiantraikan'ity sehatra automation fihaonana ity amin'ny ROI amin'ny hetsika